Personal Branding for CEOs | Brand You Image Training
လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ဝယ်သူတွေ၊ စားသုံးသူ customers တွေက ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာက အရေးကြီးသလို ဝန်ထမ်းတွေက ကိုယ့်အပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကလည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ခေတ်တုန်းကတော့ မလိုပါဘူး။ ပစ္စည်း ကောင်းရင် တန်တယ်ထင်ရင် ဝယ်သုံးကြတာပါပဲ။ ဒီပစ္စည်း ဘယ်သူထုတ်တယ်ဆိုတာလည်း စပ်စပ်စုစု လိုက်ကြည့်မနေပါဘူး။ ခုခေတ်ကတော့ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ လွယ်ကူတာရော၊ ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်တာထက် Brand အပေါ်ယုံကြည်လို့ဝယ်တာအများစုဖြစ်လာတော့ ဒီပစ္စည်းကို ဘယ်သူက ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်တာလဲ? သူက ဘယ်လိုလူလဲ? သူ့အဖွဲ့အစည်းက ဘယ်လိုလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ ပြင်ပလောကမှာ ယုံကြည်မှုရဖို့ Business Image ကိုထူထောင်သလိုပဲ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ့်အပေါ်အမြင်ကို တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ Internal Branding ကလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဘာလို့ဆို သူတို့တွေက ကုမ္ပဏီကို ကိုယ်စားပြုပြီး အပြင်ကို ထွက်ကြမယ့်လူတွေ၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ Brand၊ ကိုယ့်ရဲ့ Vision Mission Values ကို သရုပ်ဖေါ်မယ့်လူတွေမို့ပါပဲ။
၁။ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေက ကိုယ်ပြောတဲ့စကားကို 100% ယုံကြည်မှူရှိလား?
အားနာလို့/ ကြောက်လို့ / ပြန်ပြောရဲတဲ့ သတ္တိမရှိလို့ / ပြောလည်း မထူးတာမို့ မြန်မြန်ပြီး အေးရော နားထောင်နေတာလား?
၂။ ဝန်ထမ်းကိုပဲ စည်းကမ်းတွေသတ်မှတ်ပြီး ကိုယ်ကျ လိုက်နာဖို့ မေ့နေသလား?
၃။ ကိုယ်ရှိနေရင် ဝန်ထမ်းတွေ Inspire ဖြစ်သလား? Motivated ဖြစ်သလား?
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်မျက်နှာမြင်မှာ ကြောက်နေကြသလား? (ချော့တခါ ခြောက်တလှည့် အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်မှရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်) ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆူရင်တောင် ငါတို့ကို စေတနာရှိလို့ အောင်မြင်စေချင်လို့ ဆူတယ်ဆိုတာမျိုး မြင်ရပါမယ်။ ငါတို့ကို နှိပ်ကွပ်ချင်လို့ ဘောနပ်စ်မပေးချင်လို့ အပြစ်ရှာတယ်လို့ မြင်နေရင်တော့ တခုခု ပြန်စစ်ဆေးသုံးသပ်ဖို့ လိုနေပါပြီ။
၄။ အပြင်မှာ ဝန်ထမ်းတွေအချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါ သို့မဟုတ် တခြားလုပ်ငန်းက ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ့်ရဲ့ Image ကို ဘယ်လိုပုံဖေါ်မှာလဲ?
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အမြင်ကို တချိန်လုံး ထိုင်စဉ်းစားနေဖို့ မလိုပေမယ့် အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ သိနေရပါမယ်။